The Honor 20 na 20 Pro bụ ndị ọrụ gọọmentị: nkọwa, ọnụahịa na ndị ọzọ | Gam akporosis
Anyị ekwuola ọtụtụ okwu banyere ọhụụ ọkọlọtọ Honor, enyemaka nke Huawei, ụlọ ọrụ na-adịbeghị anya abanye n'ime nnukwu ọgbaghara na United States. Ndị a bụ, ọ dịghị ihe ọzọ na ihe ọ bụla na-erughị, Sọpụrụ 20 na 20 Pro, bụ nke ghọworị gọọmentị n'ụdị.
Ihe ohuru ohuru di elu na-abia na ihe di egwu na nkowa, ọ bụ ezie na ụfọdụ na-emetụtaghị anyị ma ọlị. N'agbanyeghị nke ahụ, ọrụ ikpeazụ Honor na-ewetara anyị na-ekwe nkwa ọtụtụ, yabụ anyị nwere ike ikwu na anyị na-eche ihu abụọ n'ime ngwaọrụ kachasị mma ewepụtara n'afọ a. Ọzọ, anyị na-akọwa ihe niile gbasara ha ...
1 Sọpụrụ 20 na 20 Pro: atụmatụ na nkọwa
Sọpụrụ 20 na 20 Pro: atụmatụ na nkọwa
Na-asọpụrụ 20 Pro
The Honor 20 bụ ụdị ọkọlọtọ nke na-ekenye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ àgwà niile Honor 20 Pro nwere.. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ pụtara dị ka ụdị nsụgharị dị ntakịrị, nke ezi uche dị na ya. Ka ọ dị ugbu a, ụdị dị iche iche nke Pro, maka nke ya, bụ vitamin kachasị, n'ụzọ ezi uche dị na ya, yabụ na-etu ọnụ mmejuputa ndị ọzọ.
The Honor 20 abịa na a 6.26-anụ ọhịa diagonal IPS LCD ihuenyo, nke na-enye mkpebi FullHD + nke pikselụ 2,340 x 1,080, nhazi akụkụ 19.5: 9 na nkọcha ihe oyiyi nke 412 dpi. Na mgbakwunye, ihuenyo ahụ n'onwe ya nwere onye na-agụ akara mkpịsị aka, yabụ na anyị agaghị enwe ya na azụ nke mkpanaka ahụ, ọ nwere oghere n'akụkụ aka ekpe aka ekpe iji debe igwefoto selfie 32 MP nwere oghere f / 2.0. Otu ihe a mere na Honor 20 Pro, nke nwere otu otu panel nwere otu njirimara.
Na ekwentị abụọ ahụ anyị gbabara n'ime amaara nke ọma Kirin 980 site Huawei, isi ụlọ ọrụ SoC nke ụlọ ọrụ ahụ ruru elekere elekere kachasị elu nke 2.6 GHz ma jikọta ya na Mali-G76 MP10 GPU. Nke a chipset na-esonyere 6 GB Ram, na ihe gbasara Honor 20, na 8 GB nke RAM maka 20 Pro, ma LPDDR4x, ebe nke mbụ na-abịa na ebe nchekwa dị n'ime nke 128 GB na nke abụọ nwere 256 GB. A na-ejikwa batrị 3,750 na 4,000 mAh na-akwado ha, n'otu n'otu, yana nkwado maka ngwa ngwa 22.5-watt.
Honor 20 (top) na Honor 20 Pro (ala)
N'ihe banyere igwefoto, ha abụọ na-ebu ihe osise foto anọ dị na azụ ha, ọ bụ ezie na ọ dịtụ iche. Centraldị nke etiti na-eji isi ihe mmetụta Sony IMX586 48 MP nwere oghere f / 1.8 na OIS, 117 ° n'obosara nke 16 MP, macro sensor nke 2 MP maka nso gbara ruo 4 cm site na isiokwu ahụ na onye ọzọ nke 2 MP maka ọnọdụ eserese.
Banyere Pro dị iche iche, anyị na-achọta otu ihe mmetụta sensọ abụọ dị na Honor 20, ọ bụ ezie na ihe mmetụta Sony IMX586, kama ịnwe oghere f / 1.8, ekwentị a na-akpọrọ ya f / 1.4, yabụ ọ nwere ike ijidekwu ọkụ. Ihe gbanwere mgbe anyị na-ekwu maka igwefoto abụọ ndị ọzọ, ebe a na-eji lens telephoto nke 2 MP dochie anya ihe ngosi MP 8 MP na ikike mbugharị ngwakọ nke ruru 10x, ebe omimi nke 2 MP nọchiri na nnukwu MP 2.
N'aka nke ọzọ, ma mobiles nwere ike ịdekọ 960fps super nwayọ ngagharị vidiyo na mkpebi 720p HD, yana nbudata vidiyo na 4K ruo 60 fps.
Sọpụrụ 20 (ndị nke mbụ si n’aka ekpe) na Honor 20 Pro (ndị ikpeazụ si n’aka nri)
Ma otu ma nke ozo bia A gam akporo 9.0 achịcha n'okpuru Ime Anwansi 2.1 UI, GPU Turbo 3.0, ọdịyo nke ọdịyo 9.1 gbara gburugburu, nke na-eme ka ụda nke ndị ọkà okwu na ekweisi dị mma, yana ọdụ USB-C, mana ha dị iche nha na nha, na mpempe akwụkwọ teknụzụ na-esote nke ụdị abụọ ahụ anyị kọwara ha, yana dị ka ihe niile fọdụrụ.
Nsọpụrụ 20 PRO
IKIRU 6.26-anụ ọhịa FullHD + IPS jupụtara na LCD na 2.340 x 1.080p (412 dpi) na 91.7% ruru 6.26-anụ ọhịa FullHD + IPS jupụtara na LCD na 2.340 x 1.080p (412 dpi) na 91.7% ruru
Nhazi Kirin 980 Kirin 980
Ohere TERLỌ N'IME 128 UFS 2.1 256 GB nke UFS 2.1
Ndị isi Azụ: 586 MP Sony IMX48 (f / 1.8) nke 16 MP na OIS + 2.2 MP (f / 2) + 2.4 MP (f / 2) Ultra Wide angle maka foto foto + 2.4 MP (f / XNUMX) eserese mode / Ihu: 32 MP (f / 2.0) Azụ: 586 MP Sony IMX48 (f / 1.4) na OIS + 16 MP Ultra Wide Angle (f / 2.2) + 8 MP Telephoto (f / 2.4) ruo 10x Hybrid Zoom + 2 MP (f / 2.4) maka foto nnukwu / Ihu: 32 MP (f / 2.0)
UMUAKA 3.750 mAh na 22.5 W na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa 4.000 mAh na 22.5 W na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa
OS Achịcha 9 achịcha n'okpuru Ime Anwansi 2.1 UI Achịcha 9 achịcha n'okpuru Ime Anwansi 2.1 UI
Njikọ Wi-Fi ac / Bluetooth 5.0 / USB 2.0 / GPS / A-GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS Wi-Fi ac / Bluetooth 5.0 / USB 2.0 / GPS / A-GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS
Atụmatụ ndị ọzọ In-Screen mkpisiaka Reader / ihu Faceghọta / USB-C / GPU Turbo 3.0 / Virtual Audio 9.1 Gburugburu In-Screen mkpisiaka Reader / ihu Faceghọta / USB-C / GPU Turbo 3.0 / Virtual Audio 9.1 Gburugburu
Mbibi na ibu ibu 154.25 x 73.97 x 7.87 mm na 174 gram 124.6 x 73.9 x 8.44 mm na 182 gram
E kpughebeghị kpọmkwem oge a pụrụ ịzụta ekwentị ndị a. O sina dị, anyị maara na ọ ga-abata na Spain na anyị nwere olile anya na enwere ike ịzụta ha n'ime ụbọchị ole na ole. Ọnụahịa ha bụ ndị a:
Sọpụrụ 20 (6GB RAM + 128GB ROM): 499 euro.
Sọpụrụ 20 Pro (8GB Ram + 256GB ROM: 599 euro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » The Honor 20 na 20 Pro adịworị eziokwu: anyị ga-agwa gị ihe niile gbasara ọkọlọtọ ọhụụ a!
Samsung ga-ebido mbipụta uhie nke Galaxy S10